Jack Grealish oo markiisii ugu horreysay looga yeeray xulka England kaddib markii Marcus Rashford iyo Harry Winks laga saaray safka Saddexda libaax – Gool FM
(London) 31 Agoosto 2020. Jack Grealish ayaa markii ugu horreysay looga yeeray xulka qaranka England kaddib markii Marcus Rashford iyo Harry Winks laga saaray qaranka saddexda Libaax.
Jack Grealish ayaa haatan loo yeeray waxaana uu ka soo muuqan doonaa kulammada xulka England uu la kala ciyaari doono Iceland iyo Denmark ee UEFA Nations League.
Sida uu xaqiijiyey xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA-ga Marcus Rashford iyo Harry Winks ayaa laga saaray xulka qaranka England.
Waa wicitaankii ugu horreeyey ee Kabtanka Aston Villa ee Grealish uu ka helay qarranka waa weyn ee England.
Weeraryahanka Kooxda Manchester United ee Rashford ayaa xulka qaranka England looga saaray dhaawac canqowga ah, halka laacibka khadka dhexe ee Tottenham, Winks sidoo kale lagu qasbay inuu dib ugu laabto kooxdiisa.
Xulka England ayaa wajihi doona Iceland kulan 5 bisha September ka dhici doona Reykjavik, ka hor inta aysan u safrin Copenhagen halkaasoo ay saddex maalin kaddib kula ciyaari doonaan dhiggooda Denmark.